Naceybta Islaamka iyo Muslimiinta miyaa ku soo batay Sweden? | Somaliska
Naceybka, hanjabaadaha, aflagaadada iyo weerada lagu haayo Muslimiinta ku nool Sweden ayaa soo batay sanadihii dambe sida lagu qoray wargeyska caanka ah ee Aftonbladet. Wargeyska oo wareysi ka qaaday shaqsiyaad Muslimiin ah oo door kala duwan ka ciyaara bulshada ayaa sheegay in dhibaatada lagu haayo Muslimiinta ay ku soo badanayso Sweden. Dumarka Muslimiinta ayaa lagu weeraraa wadooyinka, masaajida ayaa la gubaa, muslimiinta ayaa shaqada lagu cunsuriyeeyaa iyo dhibaatoyin kale oo badan.
Naceybta iyo aflagaada Muslimiinta lagu haayo ayaa u muuqata in ay noqotay mid caadi ah oo ay aqbaleen siyaasiyiinta, booliska iyo bulshada Sweden. Iyadoo aan sida looga hadlo Islaamka iyo Muslimiinta aan looga hadlin umadaha kale iyo diimaha kale. Qofkii Muslim ah ee ka soo muuqda saxaafada Sweden ayaa durbadiiba la kulma hanjabaad iyo aflagaado loogu soo diro boostada, emailka iyo telefoonka oo laga soo waco.
Sweden ayaa u muuqata in ay ku socoto wado mugdi ah oo dadka Muslimiinta ah ay noqdeen kuwo bartilmaameed laga dhigno. Cunsuriyada ayaa u muuqada in ay kor u sii kacayso oo xitaa ay baarlamaanka Sweden hada ku jiraan. Balse Sweden ma ahan kaligeed, dhamaan wadamada Yurub ayaa waxaa ku soo badanaya naceybka Islaamka iyo Muslimiinta. Wadanka Germany ayaa isbuucaan waxaa isugu baxay dad gaaraya 18000 qof oo ka soo horjeeda Islaamka.
Sidee kula tahay mustaqbalka Muslimiinta Sweden? Ku darso fikradaada…
Wlhi diinta islaamka Intaas oo sano ka hor ayaa nabi maxamed lagu dhibaataynayay oo uu meel uu ka galo waayay Markaa ilaahay ayaa ilaashanaya diinta iyo umada islaamka alla gaalada ha jabiyo
Fikrad lala dhacay 27 2
ubah farur says:
Bisinka ilaahow naga magan gali sharta galada
haddii dadka muslimku ku midoobi lahaayeen diinta ale ee muqadaska ah maba u baahnaan lahayn wadaamada gaalada,laakiin taasi ma muuqato oo muslimka ayagaaba is baabi.inaaya
Mustaqbalka maxaa na dhigaya waan iska tagaynaa in shaa Allaah
Waa wax iska caadi ah waana sunada in muslimiinta la dhibo
Arintaan waa horumarka islaamka qaarada yurub ee bishaareysta.
wax dhib ah malahan cadaadiskaas runti bulshada swedan mawada qabto
lkn in islaanka ladhibo lagayaabee inbadan o in ay ku islaamaan
halasabro inshallaah ilaah ayaa faraj furaayee
Waliged bay galadu jabijirte muslim waxba ma yeelikaran inshalla
waa markii ey islaamku hurdada ka kici lahaayeey oo gaaladana hoogi laheyd
الاسلام برئ من الارهاب والتطرف والجهل وعصبية الجاهلية
January 8, 2015 at 01:20
Subxanalaah waa arin fool xun Hadaan nahay ☝️Muslimin☝️ galadu waligeed naceeb waa eey nooqabtay Hadana wadan koodii ayaan nimid ilaah hanaka hayo shartooda☝️ musliminta ☝️kor gaalada hos ☝️Allahu Akbar☝️
maanta muslinku waxa u joga wakhtigi 1930 eeh yuhuda inti ka hor la xasuqin eeh laga gubi jiray melaha ay ku cibadaystan , farta o lagu fiqi jira , wadoyinka lagu cayi jiray , shaqo lo didi jiray amba lagu cunsuriyeyn jiray , yuhudiga dhib gaysta loo qabsan jiray yuhud oo dhan , wakhtigi oo kaleh ayu muslinka yurub ku jiran ,wana 90% suragal iin u dhaco xasuq hadi ayey siyasiyintu iyo masul walba qadaan wayo masuliyadisa oo laga hor tagi wayo
Asc ugu horeyn waxa socda waa islam naceyb taas waa mid muslimiinta ay garanayaan waxa ka dhalanaya waa barashada islam iyo fidida diinteyna macaan yaanan dhib loo arkin gaaladana caradooda wax ma tareyso.ciribta waa islaamka. Ilaahow lslamka guuleey gaaladana soo hanuuni.
Axlaam bashiir says:
neceybka islamka waa mid soo jireyn ah.
Gaaladuna wax ay islamka dadkkiis ka qaadi karaan ma jirto.
Allow islamka awood sii gaalada jibi.
Asc mslimiinta ilaah ha u noqdeen diintoodana ha ka Run sheegeen dacwadana ha u guntadeen guushananilaah Allaah aktiisa ayay taallaa
Asc waxa xaqiqa eheed ineyna ewalba naga jecleen laabta kuna dadaalayen sidi diinta loo babi lahaa ma aha wax ku sucub bulshada islaamka ah taas waxey ku tuseysaa inow islaamku yahay sharaf iyo qiimi ku leh caalamka balsa leh dad neceb la yiqiin mustaqbal ma xumeykaro islaamka cid wax u dhimi ma karto waxas isleehay waxey ka faa ideysanayan dad islaamka ku qarabanayo dhaqan iyo diinta suuban waxan raad ku leheen ya sameyo islaamkane ku tilmaamay inow saas yahay wakhtigan waa wakhtigi cidkasto ow muslim ah baraarugu leheed sidii looga hortago dhibaatada saameysay islaamka mid dagaal iyo mid siyaasadeysan waxan idiin rajeynaa dhamaan walaheyka islaamka ah aduuyo san iyo aakhiro wanaagsan
January 11, 2015 at 06:44
masha alaah taaan wa mid islaamka uso hoyataay waxayna kutusaaysa taan sida umada islaka ay dinta u fafinayaaan ama ay ugarsiinaya hala sabto insha alaah
Salaan kadib, waxay aniga ilatahy Islaam naceybku inay tahay mid soo jireen ah, wayna sii jireysaa ilaa iyo Qiyaamaha laga gaaro. Midda nalaga raba ayaa waxay tahay Shareecada si dhab ah inaan uqaadanno xumaantana aan wanaag ku bedelno si uu Alle noogu naxariisto Jeelelka naga danbeeyana kudayasho fiican uga tagno, sidaasi ayuu Islaamku kubadbaadi karaa sumcadna kuyeelan karaa.
Islaamka ilaahey ha guuleeeyo ameen ameen ameen